Manao Blaogy Mikasika Ny Herisetra Tao Etiopia i Andrew Heavens · Global Voices teny Malagasy
Manao Blaogy Mikasika Ny Herisetra Tao Etiopia i Andrew Heavens
Voadika ny 11 Septambra 2018 13:21 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Jona 2005)
Herinandro vitsivitsy lasa izay, sahala amin'ny toa fandresena goavana ho an'ireo mpomba ny fisokafana sy ny fanapariahana ny demokrasia ireo fifidianana tao Etiopia. Tamin'ny alàlan'ny fitaterana ny toa fitomboan'ny seza azon'ny mpanohitra, toerana 12 hatramin'ny 174, ao amin'ny parlemanta izay ahitana toerana 547, nanoratra i Abraham McLaughlin tao anatin'ny Christian Science Monitor manao hoe:
Nahitàna marika mahagaga mikasika ny fisokafana ilay fanentanana: nomena alalana tao an-drenivohitra ireo famoriambahoaka goavana nataon'ny fanoherana, ny fandrakofana ny vaovaon'ny fanoherana natao tany anatin'ireo mediam-panjakana, ary, sambany hatrizay, maherin'ny 300 ireo mpanara-maso iraisam-pirenena no nasaina hanatrika ny fandatsahambato.
Ny fisokafana mitombo be asongadin'ny governemantan'i Zenawi (teo amin'ny fitondrana izy nanomboka tamin'ny taona 1991, naharesy tamin'ireo fifidianana telo niarahan'ny maro nahita ho toy ny feno hosoka) dia tsy midika fa ho iray hatao anaty filaminana ity zotram-pifidianana ity. Tamin'ny talata teo, nanomboka nitroatra ireo mpianatra tao amin'ny sampana “Mexico” ao Addis-Abeba, ary manambana fitokonana faobe ireo mpitondra fiarakaretsaka sy ireo fiarabe fitateram-bahoaka amin'ny Alarobia. Valinkafatra nasertin'ny governemanta ny fitifirana ireo mpanohitra, nahafatesana olona 22 fara-faharatsiny.
.Tena tao anatin'ny zavanitranga mihitsy i Andrew Heavens, mpanao gazety iray tsy miankina avy ao Addis-Abeba, ary naka sary ho an'ny Reuters. Ny blaoginy, Meskel Square, ankehitriny dia feno ireo tantara sy sary mampangirifiry.
Tamin'ny fotoana iray, lehilahy iray no nivoaka tampoka ny tranompaty vonton'ny alahelo. Nanohy nikaroka an'ireo mpitsabo teny amin'ny manodidina izy, mamonkona ny totohondriny, mitady ampahakiviana ny hahita olona mba hanalefaka ny alahelony. Segondra vitsivitsy taty aoriana, nihazakazaka nivoaka tamin-dranomaso avy tao amin'ny efitrano izy.
Mba ho fitadidy fotsiny, faty 11 no hitako tao amin'ireo hopitalin'i Black Lion sy Zawdidu, naratran'ny bala avokoa izy rehetra ireo, ny sasany teo amin'ny loha. Araka ny efa fantatrao, 22 ny fanisana ofisialy ankehitriny.
Hitako ho ao aatin'ny faharoapolon'ny taonany avokoa izy rehetra ireo na raha be indrindra manakaiky ny telopolo. Mbola tanora avokoa ny ankamaroan'ireo mpanao fihetsiketsehana hitako omaly – jereo ity sary ity ahitana an'ireo tanora mitoraka vato. Ny tena mampiahiahy fatratra dia ny mety ho fihanak'ity korontana ataon'ireo mpianatra ity any amin'ireo “olona eny andalambe” manerana ny tanàna, hamadika ireo fihetsiketsehana ho lasa korontana midadasika be.
Navoakan'i Andrew teo amin'ny Flickr ireo sary. Ahitana ny sarin'ireo mpianatra nanao fihetsiketsehana teny andalam-be izy ireny, ireo tanora mitàna vato ary be loatra ireo sarin'ireo naratra sy ireo maty.
Manontany tena ny tontolombolongana Etiopiana raha toa ka mirona mankany amin'ny revolisiôna miendrika Okraniana i Etiopia. Ireo blaogera avy amin'ny mpanohitra no tena heno manokana. Manana lahatsoratra lavabe i Ethiopundit manao resaka tsy loabody hoe halatra ireo fifidianana sy tamin'ny filazàna hoe ny nahazoan'ny mpanohitra ireo toerana tao Addis-Abeba, dia rahona manakona entina hanaronana ny hala-pifidianana ankapobeny. Manome tombony ny fanadihadiana antontanisa i Dagmawi, ao anatin'izany ireo vinavina izay nilaza fa nanome tombony ny antoko eo amin'ny fitondrana ilay taham-pandraisana anjara ary milaza hosoka.
Mino ny Ethiopian Review fa ny mpitondra tenin'ny CUD (antokon'ny mpanohitra), Ato Lidetu Ayalew, dia notazonin'ny governemanta tsy misakafo sy tsy misotro rano ka angatahany ny olona mba hiantso ny CICR hiangavy fanampiana hahazoana ny famotsorana azy.
Sahala amin'ny toa poretin'ny governemanta Etiopiana ny mpilaza vaovao tsy miankina, amin'ny alalan'ny fisintonana ireo fahazoandalana hilaza vaovao tamin'ny Deutchse Welle sy ny Voice of America. Mangataka an'ireo mpaneho hevitra eo amin'ny blaoginy i Heavens mba hanohy “hampitonitony ireo fanehoankevitra”, no sady tonga saina fa tandindonin-doza ihany koa ny fisiany ao Addis Abeba .
Blaogy Etiopiana efa ho folo tatsaka kely no arahan'ny mpanangom-baovao ato amin'ny Global Voices ary angamba mety ho ilain'ireo izay maniry hanaraka ny fivoatran'ny raharaha rehetra, arakaraky ny itrangan'izy ireny.
Sary avy amin'i Andrew Heavens
1 herinandro izayAngola
2 herinandro izayNizeria
#KeepItOn: Ny fiantraikan'ny fandraràna ny Twitter ho an'ny tanora Nizeriana
17 Aogositra 2021Cap Vert
Kinasa hotontosaina amin'ny oktobra ny fifidianana ho filoham-pirenena ao Cape Verde
23 ora izayAzia Atsinanana
Mikatona vetivety noho ny fikarakarana ny famoahan-kevitra. Mandalova aoriana kely raha hilaza hevitra